15 Qaliinka Qaliinka Lafaha ee Ugu Mushaarka Badan USA | Gobolka ugu Fiican
Bogga ugu weyn 15 Qaliinka Qaliinka Lafaha ee Ugu Mushaarka Badan USA | Gobolka ugu Fiican
Lafaha lafaha waa mid ka mid ah takhasusyada ugu mushaarka badan caafimaadka adduunka. Tani waa sababta oo ah wax ka qabashada dhibaatooyin caafimaad oo la taaban karo oo haddii aan la sixin ka dhigi kara qof noloshiisa mid aan qiimo lahayn.
Bal qiyaas noloshaada oo leh nidaam muruqyada oo shaqaynaya markaad neefsanayso. Wax aan qiimo lahayn, sax?
Sidaa darteed, doorarka dhakhtarka lafaha ee dunidan laguma xoojin karo. Si taas loo gaaro, si wanaagsan ayaa loogu abaalmariyaa gaar ahaan gobollada sida USA, Canada, Switzerland si aan u magacowno dhowr. Marka loo eego diiwaanka, qalliinka lafaha/lafaha ayaa ah takhasuska labaad ee ugu sarreeya ka dib Takhasusayaasha qalliinka caagga ah oo qaata celcelis ahaan $ 526,000.
Akhri, waxaad iftiimin doontaa 15ka gobol ee ugu dhakhsaha badan qalliinka lafaha ee USA.
Waa maxay Qalliinka Lafaha?
Laanta qalliinka ee khuseysa xanuunnada saameeya nidaamka muruqyada waa qalliinka lafaha ama lafaha.
Dhakhaatiirta qalliinka lafaha ayaa daweeya dhaawacyada muruqyada, xaaladaha laf-dhabarka, dhaawaca isboortiga, xaaladaha difaaca, caabuqyada, malignantiga, iyo dhibaatooyinka ku dhasha iyadoo la adeegsanayo hababka qalliinka iyo kuwa aan qaliinka ahayn labadaba.
Waa kuma Qalliinka Lafaha?
Dhakhaatiirta qalliinka lafaha waa khubaro caafimaad oo ku takhasusay lafaha, laabatooyinka, seedaha, ligament, neuron, tendon, iyo nidaamka muruqyada u eg maqaarka. Bukaanka qaba xanuunada ama dhaawacyada nidaamkaan waa la baaraa, waa la baaraa, waana la daweeyaa.
Si kale haddii loo dhigo, dhakhaatiirta lafaha ayaa daweyn kara dhaawacyada waxayna kaa caawin karaan ka fogaanshaha dhaawacyada. Lafaha jabay, jabka cadaadiska, jabka jabka, kala -baxa, ilmada, ama dillaacyada muruqyada iyo shahwada ayaa ah sababaha caadiga ah ee ay u yimaadaan dhaqaatiirta lafaha.
Ma u qalmaa noqoshada dhakhtarka lafaha?
Haa, waa, sida takhasus kasta oo kale oo caafimaad. Waxaa gebi ahaanba mudan in la raadsado xirfad ahaan dhakhtar lafaha ah.
Waa takhasus lagu qanco kaas oo lagu daaweeyo xitaa dhibaatada noolaha muruqyada aan caadiga ahayn. Lafaha shaqaynaya, muruqyada, iyo wixii la mid ah ayaa dhammaantood looga baahan yahay inay fuliyaan hawlahaaga caadiga ah.
Iyadoo la tixgelinayo caawimaadda ay siiyaan qof qaba arrimaha cudurrada muruqyada, dhakhaatiirta qalliinka lafaha waxay ka qaadaan dareenkaas itaal darrida, wax -soo -saarka, iyo wax -tarka lahayn, maxaa yeelay ma awoodaan inay gaaraan waxay rabaan ama ku raaxaystaan ​​inay sameeyaan.
Maxay sameeyaan dhakhaatiirta qalliinka lafaha?
Dhakhaatiirta qalliinka lafaha ayaa qayb ka mid ah toddobaadka shaqada xafiiska ku qaata kala sheekaysiga bukaanka iyo waqtiga intiisa kale qolka qalliinka.
Dhakhtarka qaliinka ee laf -dhabarku wuxuu falanqeeyaa bukaannada, wuxuu ka warramaa xaaladdooda, ka dibna wuxuu go'aan ka gaaraa qorshaha daaweynta ugu fiican ee cudurka ama dhaawacaas, oo laga yaabo inuu ku lug yeesho daawo, jimicsi, ama qalliin.
Dhakhaatiir badan oo lafaha ah ayaa diiradda saara meel gaar ah oo jirka ah, sida lafdhabarta, jilibka, ama cagta, iyo anqawyada.
Dhakhaatiirta qalliinka lafaha ayaa sameeya habab kala duwan inta lagu jiro qalliinka, oo ay ku jiraan arthroscopy, oo adeegsada kaamirooyin iyo qalab khaas ah si loo baaro loona daweeyo arrimaha ka dhex jira wadajirka, iyo hagaajinta gudaha, oo adeegsata taargooyinka birta, biinanka, ama boolal si ay u qabtaan lafo jajaban booska ilaa lafku ka bogsado.
Dhakhaatiirta qalliinka lafaha ayaa si joogto ah u soo waca waxaana laga yaabaa in loogu yeero isbitaalka si loogu sameeyo qalliin degdeg ah oo ka dhasha shilalka baabuurka ama dhaawacyo kale.
Marka la soo koobo, hoosta ayaa lagu soo koobayaa shaqooyinka Dhakhtarka Lafaha ee goob kasta oo shaqo:
Waraysiyada bukaanka iyo qiimaynta xaqiijinta taariikhda caafimaadka
Dalbo oo qiimee tijaabooyinka ogaanshaha ee lagama maarmaanka ah, sida MRI-yada, Raajooyinka, iyo shaqada dhiigga
Ku talin daaweynta sida jimicsiga daweynta, nafaqada, iwm.
Samee qalliin si aad u hagaajisid/u hagaajisid lafaha jabay
Daawooyin u qor xanuunka
Samee oo la xiriir qorshayaasha daaweynta bukaanka qalliinka
Tababbarka iyo kormeerka ardayda deggan
Jaantusyada saxda ah ee dhammaystiran si loo hubiyo in diiwaannada caafimaadka la diiwaangeliyo waqtiga.
Waa maxay sababta dhakhaatiirta qalliinka lafaha lacag badan looga siiyo USA?
Mushaharka dhexdhexaadka ah ee dhakhaatiirta qalliinka Mareykanka wuxuu ahaa 166,400 oo doollar sannadkii 2010. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee ay dhakhaatiirtu u bixiyaan inta ay yihiin ayaa ah in adeegyadooda aan laga maarmin.
Waxay ku qaadan karaan maalmo dhaadheer oo mashquul ah daawaynta macaamiil kala duwan oo leh baahiyo kala duwan.
Intee in le'eg ayay dhakhaatiirta qalliinka lafaha ka sameeyaan USA?
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Dhakhtarka Lafaha ee Maraykanka waa $ 386,333 laga bilaabo Julaay 9, 2021. Taasi waa qiyaastii $ 7,429 toddobaad kasta ama $ 32,194 bishii.
Celceliska mushaharka ee Qaliinka Dhakhtarka Ortopedic wax yar baa ku kala duwan (qiyaastii $ 12,500), taas oo tilmaamaysa inay yar tahay rajada magdhowga ama horumarinta, xitaa iyadoo leh khibrad dhawr sano ah, iyadoon loo eegayn goobta.
Intee in le'eg ayay dhakhaatiirta qalliinka lafaha sare ka sameeyaan USA?
Sida laga soo xigtay ZipRecruiter, dhakhaatiirta qalliinka sare ee Ortopedic -ka ee Mareykanka Mareykanka waxay kasbadaan $ 400,000 sanadkii.
Sida loo noqdo dhakhtarka qaliinka ee Maraykanka
Si aad u noqoto dhakhtarka lafaha, waa inaad buuxisaa shuruudaha waxbarasho ee la mid ah takhaatiirta kale.
Ku kasbato shahaadada koowaad ee cilmiga sayniska kahor intaadan isku qorin dugsiga caafimaadka. Dugsiga caafimaadka ka dib, buuxi deganaanshaha lafaha; haddii aad rabto inaad ku takhasusto, sii wad waxbarashadaada barnaamijka wehelnimada.
Si aad ugu qalantid ruqsad ka dib marka aad dhammaysato barnaamijyada tababarka, waa inaad gudubtaa Guddiga Qalliinka Lafaha Mareykanka (ABOS) ama Guddiga Osteopathic Board of Orthopedic Surgery (AOBOS).
Si aad u tababbarto daawo, waa inaad ku gudubtaa Imtixaanka Shatiga Caafimaadka ee Mareykanka (USMLE) ama Baadhitaanka Shatiga Caafimaadka ee Dhakhtarka Guud (COMLEX).
Maxay yihiin 15ka gobol ee ugu mushaarka badan dhakhaatiirta qalliinka lafaha ee USA?
Waa kuwan 15ka gobol ee ugu mushaarka badan dhakhaatiirta qalliinka lafaha:
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 494,510
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 237.75
New Jersey waa lambarka koowaad liiskayaga 11 -ka gobol ee ugu mushaharka badan dhakhaatiirta qalliinka lafaha oo celcelis ahaan dakhli sanadeed ah ku dhawaad ​​$ 500,000. Mushaharkooda saacadlaha ah ayaa sidoo kale ah kan ugu sarreeya dalka.
2. Degmada Columbia
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 487,773
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 234.51
In kasta oo aysan si rasmi ah u ahayn dowlad, haddana Degmada Columbia waa mid ka mid ah gobollada ugu mushaharka badan dhakhaatiirta qalliinka lafaha ee Mareykanka, maadaama ay tahay dhul ay maamusho dowladda federaalku. Gobolku si aad u fiican ayuu u abaalmariyaa ama u magdhabaa dhakhaatiirta qalliinka lafaha.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 484,118
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 232.75
Kaliforniya waxay ka mid tahay 15ka gobol ee ugu mushaarka badan dhakhaatiirta qalliinka lafaha ee USA. Dhakhaatiirta qalliinka ee deggan gobolkan kana shaqeeya ayaa dhammaystira $ 484,000 celcelis ahaan sanad walba.
New York oo ka mid ah gobollada ugu dadka badan Ameerika oo sidoo kale loo yaqaan hoyga Big Apple ayaa iyaduna ah meesha ugu sarreysa marka la sheego waddamada bixiya dhaqaatiirta qalliinka lafaha si aad u wanaagsan. Dhakhaatiirta qalliinka lafaha ee gobolkan ayaa qaata celcelis mushahar sanadle ah $ 475,933.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 469,966
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 225.95
Waxaa ku xiga Connecticut oo sidoo kale loo yaqaan Gobolka Nutmeg, oo hoy u ah Jaamacadda Yale waxayna hoy u tahay qiyaastii $ 226 saacaddii dhakhaatiirta qalliinka lafaha. Cabbirka gobolka ayaa saamayn yar ku leh celceliska mushaharka sannadlaha ah ee $ 470,000.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 463,856
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 223.01
Ku xiga liiska dawladaha ugu mushaharka badan dhakhaatiirta qalliinka ee Massachusetts. Kani waa mid ka mid ah gobollada ugu sarreeya Ameerika oo bixiya dhakhaatiirta qalliinka ee fuliya qalliinka lafaha si aad u wanaagsan iyadoo la tixgelinayo sida ay door muhiim ah u leeyihiin. Dhakhtarka qalliinka lafaha wuxuu kasbadaa wax ka yar $ 463,856 sanadkii.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 460,991
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 221.63
Alaska waa gobol kale oo ka tirsan USA oo dhakhaatiirta lafaha si wanaagsan loogu abaal mariyo. Dhakhtarka qalliinka ee Alaska, waxaad hubsan kartaa inaad kasbato ugu yaraan $ 460 sanad walba celcelis ahaan.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 456,717
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 219.58
Maryland waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Little America sababta oo ah bay'adeeda kala duwan iyo muhiimadda ay leedahay taariikhda Mareykanka oo ah gobolka xiga ee ugu mushaarka badan dhakhaatiirta lafaha ee Mareykanka. Waxay leedahay mushahar sanadle ah oo sarreeya iyo saacad kasta, oo ah $ 456,717 iyo $ 219.58, siday u kala horreeyaan, dhakhaatiirta qalliinka lafaha ee halkaas ku nool.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 450,404
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 216.54
In kasta oo Jasiiradda Rhode ay tahay gobolka ugu dadka yar iyo siddeedaad ee ugu dadka yar Maraykanka, haddana kuma soo noqon mushaharkii dhakhaatiirta qalliinka lafaha. Waxay si kibir leh u sameeyaan celcelis dakhli sanadeed ku dhawaad ​​$ 450,000.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 450,110
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 216.40
Washington waa gobol kale oo Mareykan ah halkaas oo ay joogaan dhakhaatiirta qalliinka lafaha. Jasiiradda Rhode waa xoogaa xoogaa ka hooseeya. Si kastaba ha noqotee, Gobolka Evergreen, dhakhaatiirta qalliinka lafaha waxay kasbadaan celcelis ahaan $ 450,110 sanadkii iyo in ka badan $ 200 saacaddii.
11. Delaware: $ 449,467
Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 449,267
Mushaharka celcelis ahaan saacadlaha ah: $ 215.99
Dhakhaatiirta lafaha ee USA, Delaware waa dalka ugu weyn ee wax ku biiriyay. Delaware, celceliska mushaharka saacadaha ee dhakhaatiirta lafaha ma aha mid aad u xun, gaar ahaan marka la eego xaqiiqda ah inay tahay mid ka mid ah dawladaha ugu yar liiskayaga. Dhakhtarka qalliinka lafaha ayaa bixiya celcelis ahaan mushaharka sanadlaha ah ee $ 449,267 oo leh celcelis ahaan saacaddiiba $ 215, 99.
Celceliska mushaharka sannadkii: $ 414,715
Celceliska Mushaharka Saacadda: $ 199.38
Nevada waa mid ka mid ah gobolada Mareykanka ee halkaas u taga inay ku tababaraan xirfaddaada sida dhakhtarka qalliinka ma noqon doono fikrad xun haba yaraatee. Dhakhaatiirta qalliinka ee ku takhasusay qalliinka lafaha ayaa sameeya qiyaastii $ 414, 715 sanadkii sanadkii celcelis ahaan mushahar saacad ah oo qiyaastii ah $ 199.38.
Celceliska mushaharka sannadkii: $ 388,376
Celceliska Mushaharka Saacadda: $ 186.72
Kani waa gobol kale oo bixiya dhaqaatiirta qalliinka lafaha sare. Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso gobolkan sidii dhakhtar qalliin, waxaad u badan tahay inaad kasbato qiyaastii $ 388,376 celcelis ahaan sanadkiiba.
Celceliska mushaharka sannadkii: $ 383,413
Celceliska Mushaharka Saacadda: $ 184.33
Doorashada inaad ka shaqayso gobol sida New Hampshire oo ah dhakhtarka lafaha ma aha fikrad xun haba yaraatee maxaa yeelay waxaad sidoo kale kasban doontaa lacag sare. Xaaladdan, dhakhaatiirta qalliinka Celceliska Mushaharka Sannadlaha ah wuxuu ku saabsan yahay $ 383,413.
Celceliska mushaharka sannadkii: $ 387,975
Celceliska Mushaharka Saacadda: $ 186.53
Ugu dambayn laakiin ugu yaraan 15 dhakhtar qalliinka lafaha ee ugu mushaarka badan USA ee Kentucky. Dhakhaatiirta qalliinka lafaha ee Kentucky waxay kasbadaan qiyaastii $ 387,975 celcelis ahaan sanadkii.
Su'aalaha La Weydiiyo (Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo)
Waa maxay celceliska mushaharka sanadlaha ah ee New York ee dhakhaatiirta qalliinka lafaha?
Mushaharka sanadlaha ah ee New York waa $ 475,933.
Dhakhaatiirta qalliinka lafaha waa khubaro caafimaad oo ku takhasusay lafaha, laabatooyinka, seedaha, ligament, neuron, tendon, iyo nidaamka muruqyada u eg maqaarka.
Muxuu sameeyaa dhakhtarka lafaha?
Dhakhaatiirta qalliinka lafaha waa dhakhaatiir ku takhasusay lafaha, wadajirka, seedaha, seedaha, iyo muruqyada, kuwaas oo aad muhiim ugu ah dhaqdhaqaaqa iyo nolol maalmeedka. Waa takhasus aad u baahsan oo leh in ka badan 200 lafo oo ku jira jirka aadanaha. Kala -goysyada kala firdhay. Kala -goysyada kala firdhay. Xanuunka misigta ama dhabarka.
Intee in le'eg ayay dhakhaatiirta qalliinka lafaha sare ka sameeyaan Maraykanka?
Dhakhaatiirta Qalliinka Lafaha ee Sare ee Mareykanka waxay kasbadaan $ 400,000 sanadkii.
Waa maxay qalliinka ugu weyn ee lafaha?
Hawlgallada lafaha waxaa ka mid ah Wadarta arthroplasty hip (THA), beddelidda jilibka oo dhan (TKR), qalliinnada jabka miskaha (PFS), iyo qalliinka garabka ayaa ah hababka wadaagga ee ugu baahsan.
10 Dhakhtar oo ugu Mushaharka Badan Caalamka & Qiimahooda saafiga ah
15 Neurosurgeon ee ugu mushaarka badan Dunida/Wadamada ugu fiican
10 Taqasus ee Carruurta Carruurta ugu Lacagta Badan Adduunka
Takhasusyada Dhakhtarka Maskaxda ee Ugu Lacag Badan
15 Dhaqaatiirta Ugu Mushaharka Badan NYC
15 Khabiir ee Paralegal -ka ugu Mushaarka Badan Adduunka
Waa maxay Barnaamijyada Hagaajinta iPhone iyo sidee u shaqeeyaa?
10 Dugsiyada Kalkaalinta Caafimaadka ee Jacksonville Florida
Jacksonville Florida waa bulsho caan ah, hoy u ah machadyo badan oo waxbarasho sare ah, kuwaas oo inta badan bixiya…
15 Noocyada Suuxinta ee ugu Lacagta Badan | Dalalka ugu fiican
Dhakhaatiirta suuxinta ayaa qiimeeya, kormeera, oo kormeera daryeelka bukaanka ka hor, inta lagu jiro, iyo ka dib qalliinka, waxay maamulaan suuxin, maamulaan daryeelka suuxinta…
Qorshayaasha Caymiska Caafimaadka Shaqsiga ee ugu Fiican 10
Ma rabno inaan shil galno ama jirno. Si kastaba ha ahaatee, arrimahan ayaa laga yaabaa inay dhacaan hal mar…
15 Lacag Bixinta Ugu Badan Ee Dhakhtarka Dhakhtarka Shaqooyinka | Gobolka ugu Fiican
Helitaanka dalab afka ah oo mushaharka iyo mushaharka foosha ka dib waxay caadiyan u tahay keega qof kasta,…
10 Tijaabo Caafimaad Oo Ugu Lacag Badan Adduunka
Haddii aad si buuxda u maamusho wakhtigaaga sababtoo ah saacadaha shaqada ee dabacsan ama laga yaabee inaad adigu leedahay…